Hutano, 01 Chivabvu 2017
Touching Lives Africa Foundation Yotsvagira Vasikana Vanoshaya maSanitary Pads
Muzvare Monica Chiwunda, kuburikidza nechikoro chavo chevana vadiki cheCapital Kids Pre-School chiri muHarare, pamwechete naVaRabson Shumba, vesangano reTouching Lives Africa Foundation, vari kuunganidza mari kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe pamwe nemakambani kuti vabatsire nekutenga ma pads aya.
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vashora vamwe vevaimbova varwi muhondo yerusununguko vachiti vave kukara masimba zvakanyanyisa.
Vanhu Makumi Maviri Vanofa Mutsaona Vachienda kuSouth Africa
Vanhu makumi maviri vakashaya nezuro manheru munjodzi yemumugwagwa yekubonderana kwebhazi rekwaProliner nerori parwizi Nyamatikiti pedyo neChaka kwaChirumanzu.
Zimbabwe Yokumbira Mamiriyoni Mazana Matanhatu eMadhora kuGlobal Fund
Zimbabwe yaisa chikumbiro kuGlobal Fund chemari inosvika $628 million.
Vari Kunze Vokurudzirwa Kushanda Pamwe neVari Kumusha
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kukurudzirwa kuti zvirambe zvichitevera zviri kuitika kumusha kuburikidza nekuramba zvichidyidzana nevari kumusha pamwe nekutevera zviri kuitika, mungave mune zvematongerwo enyika kana mabhizimusi.